အသက် ၃၃ နှစ် - လိင်တံပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကိုခံယူခဲ့သော်လည်းယင်းသည် porn-induced ED - Your Brain On Porn ဖြစ်သည်
PIED မှခံစားနေရသောယောက်ျားများအားကျွမ်းကျင်သူများကဘာပြောပါသလဲ (အကောင်းနှင့်အဆိုး)
(၃၃) နှစ် - လိင်တံပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကိုခံယူခဲ့သော်လည်း၊
ငါသည်ဤ post ကိုဖတ်ရှုဖို့အချိန်ယူဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အစဉ်အဆက်ရှိသည်အကြီးဆုံးအတားအဆီး, ငါတို့ကိုအများကြီးငါတို့သည်ထောက်ခံမှုအဘို့ဤ site ကိုကများကဲ့သို့အခြားသူများအားဖွင့်နှင့်ငါတို့သည်၏အသက်တာ၌အဓိကအတားအဆီး alot မှသည်အဘယ်အရာကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ (နှင့်ငါကဲ့သို့သောအချို့မှလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်ကွောငျးသိရ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရ) နှင့်ယခုတွင်ငါသည်အကူအညီနဲ့ဘို့သင့်ကိုလူအပေါင်းတို့အားလှည့်ငါကမှထွက်ရှိတစ်စုံတစ်ယောက်ကူညီစေခြင်းငှါမျှော်လင့်ချက်၌ငါ့ဇာတ်လမ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဝေမျှဖို့။
ငါပထမဦးဆုံးအခန့် 33 နှစ်ရှိပြီ၏အလွန်ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ mags ကမှမိတ်ဆက်အကြောင်းကို 8 မှာ porno ရုပ်ရှင်နှင့် 11 အကြောင်းကိုမှာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှအပေါ်ပြောင်းရွေ့ခံခဲ့ရကတည်းကအမေတစ်ဦးညစ်ညမ်းစှဲလမျးသူဖြစ်ရပြီ, 13 အသက်အနှစ်ဖြစ်၏။ ငါအကြီးအကျယ်စွဲခဲ့တဲ့ကျွန်မစိတ်ပူပန်ကြီးပြင်းခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခဲ့ရပြီးညစ်ညမ်းငါ၏အပြဿနာများကနေသဘာဝအာရုံဖြစ်ခဲ့သည်။ ကိုယ့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပြဿနာများရှိခဲ့ဘာလို့ငါအစဉ်အမြဲငါ 15 နှစ်ရှိပြီမှာမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူကြိုးစားခဲ့အလွန်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အနေဖြင့်, ငါလုံးဝအားလျော့ခဲ့တယ်, သိတယ်ဘယ်တော့မှမ။
နှစ်များတစ်လျှောက် docs, urologists, endocrinologists, therapists နှင့် psychologists တော်တော်များများကကျွန်မရဲ့ ED ကစိုးရိမ်စိတ်နဲ့စိတ်ကျရောဂါကြောင့်လို့ပြောလိမ့်မယ်။ ထိုမှတ်တမ်းများကပင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ကျန်းမာကြောင်းအထူးသဖြင့်သင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုပါကဆက်လက်ပြောကြားသည်။ ငါပထမ ဦး ဆုံးကြိုးစားစဉ်ကတည်းကမရေမတွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်၊ ငါဟာတည်ငြိမ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ရင်တောင်ငါဟာနည်းနည်းစိတ်လှုပ်ရှားနေမှာမဟုတ်ဘူး၊ ငါလည်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုမခံစားရဘူး၊ docs အတွက်စာလုံးပေမဲ့ ED ကကျန်ပါသေးတယ်။ ငါနှင့်အတူဖြစ်ပျက်ကိုရှာဖွေရန်အပူတပြင်း, ဒီရုန်းကန်အဆုံးသတ်ရန်အပူတပြင်းပါပြီ။ ငါကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်သို့မဟုတ်ဟော်မုန်းပြproblemနာဖြစ်ခဲ့ရတယ်ယုံကြည်တယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကိုယ့်စိတ်ကူးယဉ်အရာအားလုံးအကြောင်းကိုကြိုးစားခဲ့ပြီ။
ငါ ED ကိုကုသဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ငါလုပ်ခဲ့တယ်အလွန်အထူးအရာတစျခုအကွောငျးပွောပါလိမ့်မယ်သောဤအရူးအပေါငျးတို့သစာရင်းပြုစုဖို့ကြိုးစားတောင်မှဝံ့ကြဘူးနှင့်ဤငါမျှော်လင့်ချက်၌ဤ post ကိုရေးသားခြင်း၏အကြီးမားဆုံးအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်ုပ်တစ်နည်းနည်းဖြင့်စိတ်ကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာတွေ့နိုင်ပြီးကိုယ့်လုပ်ရပ်က PMO မရှိသောကျွန်ုပ်၏ရေရှည်တိုးတက်မှုကိုထိခိုက်စေလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က StrangSex လို့ခေါ်တဲ့တီဗွီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်။ သူကကလေးငယ် (Dylan) အကြောင်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီးသူ့လိင်တံကို ဦး တည်နေတဲ့ပိတ်ဆို့နေတဲ့သွေးလွှတ်ကြောကနေအတွေ့အကြုံရခဲ့တယ်။ သူသည်သွေးကြောတစ်ခုမှအခြားသွေးလွှတ်ကြောတစ်ခုသို့သွေးစီးဆင်းမှုကိုပြောင်းလဲစေသည့်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့သည်။ ငါ Dylan သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့တူသောဆရာဝန်ဒေါက်တာ Irwin Goldstein သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ကယ်လီဖိုးနီးယားသို့ပျံသန်းရောက်ရှိခဲ့သည် ဒေါက်တာ Goldstein ကကျွန်ုပ်၏သွေးကြောပိတ်ဆို့ခြင်းကိုခံယူရမည်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနောက်သူသည်ကျွန်ုပ်ကိုပထမဆုံးဟော်မုန်းကုသမှုပေးခဲ့ပြီးတိုးတက်မှုသုညပြီးနောက်သူသည်ကျွန်ုပ်အားခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူရန်အခိုင်အမာပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းသည်အလွန်လျောက်ပတ်သောအရွယ်အစားခွဲစိတ်ကုသမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူ၏ ၆ နာရီခန့်သည်ကျွန်ုပ်ဝမ်းဗိုက်အတွင်းသွေးကြောများဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် dDr ၏ဖော်ပြချက်အရ၊ Goldstein အဖြစ် "သင်၏အတွင်း၌သင်၏လိင်တံကိုဖွင့်" ။ ဒေါက်တာဂျီပြောခဲ့သည့်ခွဲစိတ်ကုသမှုမှာပြီးပြည့်စုံသွားပြီဖြစ်သည်။ ယခုသည်စောင့်ဆိုင်းနေရခြင်းသာဖြစ်သည်။ ၆ လအတွင်း ၁ နှစ်အတွင်းပုံမှန်စိုက်ထူခြင်းခံရသည်ကိုငါမြင်သင့်သည်။ ငါစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်ခဲ့ပေမယ့်ဘာမှမရှိဘူးတကယ်တော့ငါငါ့စိုက်ထူနှင့်အတူပင်ခက်ခဲအချိန်ရှိသကဲ့သို့ငါခံစားရတယ် !! အခုငါဒီနေရာမှာငါထိတ်လန့်နေပြီ၊ ငါဘာလုပ်မိခဲ့ပြီလဲ။ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာကိုကုစားရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်သည်ယခင်ကထက် ပို၍ ပင်ဆိုးရွားသည့်တိုင်အောင်ခွဲစိတ်ဆရာ ၀ န်တစ် ဦး အားဖြတ်တောက်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
တစ်နှစ်ခန့်ကြာပြီးနောက်သူ၏ရုံးခန်းများသို့ကျွန်တော်ထွက်ပြေးခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်ယခင်ခံစားခဲ့ရသည့်အတိုင်းမခံစားမိသကဲ့သို့ခံစားရသကဲ့သို့ခံစားရခြင်းနှင့်မထမြောက်မှီမတိုင်မီကပင် ပို၍ ပင်ခက်ခဲသည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားရကြောင်းပြောပြခဲ့သည်။ သူကကျွန်တော့်ကိုနောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ပြီး“ ငါမင်းရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုသွေးစီးဆင်းမှုမရှိဘဲဟော်မုန်းမညီမျှမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲနေတယ်” လို့ပြောလိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူရန်နှင့်လိုင်းများစွာတွင်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုမပါဘဲကျွန်ုပ်မည်သည့်အခါမျှပုံမှန်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုတစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုမည်သို့ယုံကြည်စေနိုင်မည်နည်း၊ ဤနေရာတွင်ထိုင်။ သူသည်ကျွန်ုပ်၏ရောဂါကိုပြောင်းလဲပစ်သည်ဟုပြောပါလိမ့်မည်။ ငါထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်။ အဲဒီအမှားကြီးကိုငါကျူးလွန်မိပြီလို့ငါခံစားမိနိုင်ခဲ့တယ်။ ခွဲစိတ်ကုသမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပြုခဲ့တယ်၊ အခုတော့ကျန်တဲ့တစ်သက်တာလုံးငါဆက်နေမှာပါ။
ကျွန်မသတ်သေ၏အတွေးများကိုယခုနေ့စဉ်လူနေမှုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်ကြသည် ဖြစ်. , နက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်ကျရောဂါသို့ခံစားရတယ်။ တစ်ခုတည်းသောမေးခွန်းတစ်ခုကိုငါသည်ကိုယ်အသက်ကိုအဆုံးသတ်ဆုံးဖြတ်မယ့်ငါပေးသောလမ်း, ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့စိတ်ဆင်းရဲဘဝတိုးချဲ့ဖို့ရည်ရွယ်ချက်မမြင်ရခဲ့ပါကအဆုံးသတ်ကရောက်စေဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အခုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ဦးစိတ်ဓာတ်ကျပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်စဉ်းစားပါကြပါဘူး။ တကယ်တော့ငါဘဝမှာအဘို့အလွန်ကျေးဇူးတင်ဖြစ်ကြောင်းကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာအများကြီးရှိသည်။ ငါသည်ဤစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောအတှေးအရှိခြင်းမကြိုက်ဘူး။ သူတို့ကိုငါအကြောင်းကို (အခြားပြီးတော့ငါ့အစ်ကို) ကလူမပြောခဲ့ပါဘူး။ ငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရှာနေမခံခဲ့ရပါဘူး။ ငါသည်ဤအချက်မှာတော့ဘူးတိုက်ခိုက်နေအတွက်မျှော်လင့်ချက်မမွငျနိုငျသောကွောငျ့ငါအမှန်တကယ်နှင့်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့သေဆုံးချင်တယ်။
ငါဘယ်လိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာငါမမှတ်မိတော့ဘူး။ ငါ Googled ကိုဖြတ်ပြီးသွားရမယ်ဆိုတာငါမမှတ်မိဘူး။ တစ်နေ့ကျတော့မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုတွေ့တယ်။ ဗွီဒီယိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ဗွီဒီယိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ဒါဇင်ပေါင်းများစွာသောဇာတ်လမ်းတွေကိုဖတ်ပြီးအလွန်လျင်မြန်စွာစလိုက်သည်။ မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြန်ကြည့်လိုက်တော့စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေနဲ့ဆူညံသံတွေကြောင့်နစ်မြှုပ်သွားတဲ့မောပန်းနေတဲ့တီးတိုးအသံလေးလိုလိုပြန်ကြည့်မိသည်။ ငါအရမ်းနာကျင်မှုဆောင်ခဲ့သောငါ့အပျြောအပါးပါပဲ ငါ NOFAP ၏အလေ့အကျင့်မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြှုပ်နှံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါ 45 ရက်ကျော်တ ဦး တည်းကလုပ်လေ၏။ ငါတစ်ခါမှမသွားဖူးတဲ့အရှည်ဆုံးကအပတ်စဉ်ဆုံးဖြစ်လို့ဒီဟာအတော်လေးအောင်မြင်ခဲ့တယ်။
ဦး နှောက်မြူနှင်းနှင့်အပြင်းအထန်ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်၊ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအနေဖြင့်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်နံနက်သစ်သားရှိခဲ့ပြီ၊ ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားဘေးတွင်အိပ် ခဲ့၍ ဘေးတွင်လဲလျောင်း။ နေရခဲသည်။ သူမ။ ဒီအပြောင်းအလဲတွေအတွက်ကျွန်တော်အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်၊ အဲ့ဒီအရာတွေတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုငါမသိဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိအောင်ငါရပ်တန့်ပြီးဖမ်းရလိမ့်မယ်။ ငါနောက်တဖန်နောက်တဖန်နောက်တဖန်နောက်တဖန်နောက်တဖန်နောက်တဖန်နောက်တဖန်လိုက်။ ကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းလာတယ် အကြှနျုပျ၏မြူပို။ ပင်ပြင်းထန်သောဖြစ်သလိုပဲ။ ငါကိုယ်တိုင်ရုန်းကန်မှုများကိုဖြတ်သန်းနေစဉ်စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစေရန်အတွက်ငါ့အားဟောင်းနွမ်းသောဒုစရိုက်ကိုပြုခြင်းကိုတွေ့ရသည်။ ငါကကိုယ့်ကိုကိုယ်မုန်း၏။ ငါမုန်းတီးရာသို့ပြန်လှည့်ခြင်းကိုရွံရှာခဲ့သည်။ ငါရဲတိုက်ကိုတက်ဆက်လက်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ယခင်ကထက်ပိုမိုပြင်းထန်သောသွားကြဖို့သတ္တိတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ငါအကြမ်းဖျင်း 60 ရက်ပေါင်းငါ၏အရှည်ဆုံး Streak အပေါ်ယခုဖြစ်၏။ တကယ့် flatline အတွက် IAM သို့သော်ကျွန်မအံ့သြတိုးတက်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့အချို့ကိုမြင်ကြပြီ။ ကျွန်မနံနက်သစ်သားကအလွန်အထင်ကြီးခဲ့ကြတဲ့စုံတွဲကြိမ်ရှိခဲ့ပါပြီ။ ငါစုံတွဲတစ်တွဲကြိမ် (porn မပါဘဲ) ငါ၏အစိုက်ထူစမ်းသပ်ပြီးသူတို့ကိုခက်ခဲများနှင့်ထိုင်မှတက်ရပ်နေဆင်းကိုတင်သောမှငါ့ရပ်တည်ချက်ကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုပင်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တတ်နိုင်ရော့ခ်ဖြစ်တွေ့ရှိရှိသည်။ ငါ့ကိုဒီအလုပျဖို့အတှကျကမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်မီ။ ကျွန်မတစ်ဦး flatline အတွက်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြနဲ့အခုလိင်အဘို့အဘယ်သူမျှမအလိုဆန္ဒရှိပေမယ့်လူတစ်ဦးမယ်အထဲကပိုပြီးကျွန်မပျော်ရွှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုပိုပြီးနေ့စဉ်ပိုပြီးခံစားရသည်။ ငါဒါနှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့အဖြစ်, ဦးနှောက်မြူနှင့်အတူရုန်းကန်ဖို့ရှိသည်နောက်တဖန်ပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းထင်နှင့်မနိုင်ဖြစ်ခြင်းကိုချစ်။ အမှုအရာသည်နောက်တဖန်ပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ကြသည်။ ငါနေဆဲငါရေရှည်ပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည့်ခွဲစိတ်ကုသမှုနှင့်အတူတစ်စုံတစ်ခုပြုစိုးရိမ်ပူပန်နှင့်အတူတိုင်းတခါခဏ၌ငါ၏ဦးခေါင်း၌သူတို့အားသံသယအတွေးများကိုရပေမယ့်ပြီးရင်ငါတိုးတက်မှု alot လုပ်နဲ့ကျွန်မကိုယ်ထိလက်ရောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြကြောင်းတွေ့မြင် ဒဏ်ငွေသော rewiring ထိုအနာရောဂါငြိမ်းစရာမှလမ်းကြောင်းများနှင့်ခွဲစိတ်မှုအကြှနျုပျကိုအဘယ်သူမျှမနေမကောင်းသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကပင်အမှုအရာပိုကောင်းစေခဲ့ပါကြောင်းဖြစ်သကျသပွေပါလိမ့်မယ်။
ငါသည်သင်တို့ကိုငါတို့ရှိသမျှသည်ဒီခရီးအတူကျော်လွှားဖို့အခက်အခဲတွေရှိခဲ့ကြပြီဝေးကနေယူစေခြင်းငှါ, သင်သည်ဤဖတ်ရှုဖို့အချိန်ကိုလုယူလျှင်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အဲဒီတစ်ခုချင်းစီကိုကြှနျုပျတို့သညျဤကပ်ရောဂါမှအသိအမြင်ကိုရောက်စေဖို့တစျခုဝိညာဏ်အဖြစ်ပြုမူတကယ်တော့ကျွန်တော်တစ်ဦးတည်းနှင့်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကို, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းတွေထဲမှာအတူတူကြုံတွေ့နေကြရသည်။ ငါသည်သင်တို့၏ပုံပြင်များ shared ကြသူသင်တို့ရှိသမျှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူတို့ကိုငါဖတ်ပါနှင့်သူတို့သညျငါ့ကိုခိုင်ခံ့စေနဲ့ကျွန်မမျှဝေစဉ်းစားခဲ့ကြပေမယ့်သေးအဲဒီလိုလုပ်ဖို့သင့်ရဲ့ပုံပြင်ဝေမျှဖို့ခြေလှမ်းများယူကြပြီမဟုတ်သူကိုသငျသညျမဆိုအားပေးပါ။ သင်တို့ကို ထောက်. ထို့နောက်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဖို့အလားတူဇာတ်လမ်းကိုကြားနာမှအကျိုးစေခြင်းငှါ, အဘယ်သူသည်သူတစ်ပါး၏မျက်နှာကို ထောက်. မရလျှင်။ ငါဝမ်းမြောက်စွာသူတို့ကိုဖတ်ပါလိမ့်မယ်ငါသူတို့ shared ပြီကွာဤမျှလောက်များစွာသောအခြားသူတွေနှင့်အတွေ့အကြုံများကနေယူကြပြီအဖြစ်သင်နှင့်သင့်ပုံပြင်တွေတစျဦးစီကနေတစ်ခုခုယူသှားဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ပို့ရန် LINK - 60 ရက်, တိုးတက်မှုကိုမြင်လျှင်